Bengali – democracy for burma
#MOI #Burma #Myanmar #handed #over #159 verified #Bangladesh #nationals
On August 25, 2015 August 25, 2015 By Burma Myanmar newsIn BENGALI, Burma, Ministry of Foreign Affairs, MYANMAR, PRESSLeaveacomment
Myanmar handed over 159 verified Bangladesh nationals among those rescued by Myanmar
1. On 25 August 2015, Myanmar officially handed over additional verified 125 Bangladesh nationals among the boat people rescued by Myanmar in May 2015. They were handed over to Bangladesh side at Myanmar and Bangladesh border after the flag meeting in Taung Pyo ( Let We)
2. A team led by U Saw Naing, Deputy Director, Maung Taw District Immigration Officer from Myanmar handed over the 125 Bangladesh nationals to the Commanding Officer of No 17 Border Guard Battalion of Cox’s Bazar and his team. Acting Police Lieutenant Colonel Kyaw Tay Za from Police Border Guard of Myanmar and Mr. Mahbubur Rahman, Consul from the Bangladesh Consulate in Sittwe also observed the event. The No.17 Border Guard Battalion of Cox’s Bazar brought the 125 persons back at 14:10 hrs to Bangladesh.
3. A total of 626 verified Bangladesh nationals rescued from the two boats have been repatriated to their place of origin, Bangladesh, on five different occasions. Authorities in Bangladesh continue to verify the remaining persons from the two boats rescued. The remaining boat people will be handed over to the country of origin upon completion of the verification process.
!! #လှေစီးသွားသူများထဲတွင် #ရခိုင်ပြည်နယ် #ဒုက္ခသည်စခန်းမှ #မပါဝင်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရဆို
On May 21, 2015 By Burma Myanmar newsIn BOAT PEOPLE, Burma, MYANMAR, NARINJARA NEWS, RAKHKINELeaveacomment
မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားနေကြသည့်လှေစီးဘင်္ဂါလီများအထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ပါဝင်ခြင်း မရှိဟု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
မေလ ၁၉ ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးအစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဦးလှသိန်းက ထိုသို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
“အဲဒီလှေစီး ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတဲ့သူတွေကို ဘာအထောက်အထားနဲ့ စွပ်စွဲနေကြတာလဲလို့ ကျနော်တို့က မေးချင်တယ်။ ကျနော် တို့မှာ ဒီကနေ့အထိ ဘယ်ဒုက္ခ သည်စခန်းက ဘယ်ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်တွေမှ လူကုန်ကူးပွဲစားတွေနဲ့ လိုက်သွားလို့ ပျောက်နေတာ မရှိသေးဘူး”ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်း ၁ဝ ခုကျော်ရှိသော်လည်း ယင်းစခန်းရှိဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည် များကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်တို့က လုံခြုံရေးအပြည့်အဝရယူထားသဖြင့် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည် များအနေဖြင့် အလွယ်တကူဝင်/ထွက်သွားလာမှု မရှိကြောင်းလည်း ဦးလှသိန်းက ဆက်ပြောသည်။
“ရိုဟင်ဂျာဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တန်းမြင်ကြတော့တာပဲ။ ကျနော်တို့ သိရသလောက်ကတော့ အဲဒီလှေစီးဒုက္ခသည်တွေကို မင်းတို့ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင် ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောဆိုပြီးတော့ လူပွဲစားက သင်ပေးပြီးသား။ ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေအားလုံးက ခုလို ထွက်ဆိုကြတာ”ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
ယခု မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကယ်တင်ထားသော လှေစီးဒုက္ခသည်များသည် ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ကမ်းခြေမှ တဆင့် ထိုင်းလုပ် ၀ါးလက် ငါးဖမ်းလှေများဖြင့် ထွက်ခွာကြသူများ ဖြစ်ကြကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ သတင်းမီဒီယာများကမူ ယခု လှေစီဒုက္ခသည်များမှာ ဖိနှိပ် ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရမှုတို့ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိဒုက္ခသည် စခန်းများမှ ထွက်ပြေးလာကြသူများ ဖြစ်ပြီး အချို့မီဒီယာများကမူ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ လူအချို့ကို ငွေဖြင့် ရွေး၍ လူမှောင်ခိုသမားများလက်မှ ပြန်လည် ကယ်တင်ခဲ့ရသည်ဟု သတင်းများတွင် ဖော်ပြနေကြသည်။
ယင်းသို့ ဘင်္ဂါလီကို ရိုဟင်ဂျာဟုအမည်ခံကာ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပုံရိပ်ကျဆင်းစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးလှသိန်းက ယင်းသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
လှေစီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၁ ဦး နယ်စပ်တွင် ဖမ်းမိပြီးနောက် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ပိုင်းတွင် သောင်တင်နေသော ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးမိပြီးနောက် မောင်တောနယ်စပ် အပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် တပ်မတော်(လေ)၊ တပ်မတော် (ရေ) အပါအ၀င် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့အင်အားကို တိုးချဲ့ချထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံသား ၁၁ ဦးကို မေလ ၁၇ ရက်နေ့၊ နံနက် ၇ နာရီအချိန်က မောင်တောမြို့နယ်၊ ဥဒေါင်း (အနောက်) ကျေးရွာအနီး ကံပူးချောင်းပုစွန်ကန်ဘောင်ပေါ်တွင် အိပ်ပျော်လျက်ရှိနေစဉ် အဆိုပါကျေးရွာမှ ဆယ်အိမ်မှူးဖြစ်သူ လာလူမျာ(၄၈ နှစ်)ကတွေ့ရှိကာ နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ဥဒေါင်းရဲ ကင်းစခန်းသို့ အကြောင်းကြားရာမှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယခုဖမ်းမိသူ ၁၁ ဦးမှာ မာမတ်ရှော်အီအုလ်(၁၈ နှစ်) ၊ ရှော်လမီဒေါ်လီရွာ၊
ဒါကာမြို့၊ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ)၊ ရှာမာဟိန်(၂၈ နှစ်၊ ဂါလံပူရွာ၊
ဒါကာမြို့)၊ လာဒူလ်(၃ဝ နှစ်၊ မိုလာန်ပူရွာ၊ ဒါကာမြို့)၊ မူဟာ မတ်အီစ္စလာမ်
(၃၈ နှစ်၊ ရှော်ကော်ရီဘတ်ရွာ၊ ဂျိုက်ကူဟတ်မြို့)၊
မိုဟာမတ်ဆော်မိုရ်ဒူစ်အီစ္စလာမ်(၂ဝ နှစ်၊ မာတီကော်ရာရွာ၊ ရှာရှာမြို့)၊
မိုဟာမတ်ဖာရုစ်(၂၇ နှစ်၊ အာရော်လီရွာ၊ စစ်တကောင်းမြို့)၊
မိုဟာမတ်မူဆာ(၁၉နှစ်) ၊ ဂေါ်ဂူဒါရာရွာ၊ စစ်တကောင်းမြို့)၊
မိုဟာမတ်အီစ္စမိုင်ဟူဆောင်း(၁၂နှစ်၊ ရှာမီတာနီရွာ၊ ရာရှိတ်မြို့)၊
မိုဟာမတ်ရီဘဲရှော်ဒါ(၁၉ နှစ်၊ ဗယ်ကာလီရွာ၊ ခိုန်လန်မြို့)၊ မိုဟာမတ် ရှော်ရှိန်မော်ရိန်(၁၉ နှစ်၊
ဗယ်ကာလီရွာ၊ ရာရှိန်းမြို့)နှင့် မိုဟာမတ်မော်ဇွန်ဘီရှာ(၁၇ နှစ်၊
နော်ဂေါဟာလီရွာ၊ ခိုန်လန်မြို့) တို့ဖြစ်ကြကြောင်း ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းအရ သိရသည်။ Continue reading “!! #လှေစီးသွားသူများထဲတွင် #ရခိုင်ပြည်နယ် #ဒုက္ခသည်စခန်းမှ #မပါဝင်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရဆို” →
“Rohingya” #Bengali #Muslims will #not be #able to #vote in #Myanmar’s #referendum
On February 12, 2015 February 12, 2015 By Burma Myanmar newsIn BENGALI, Burma, MYANMAR, NO VOTELeaveacomment
“Rohingya” Bengali Muslims will not be able to vote in Myanmar’s referendum after President Thein Sein withdrew temporary voting rights following protests.
Hundreds of people demonstrated in Yangon Myanmar’s biggest city on Wednesday to protestagovernment decision to allow people without full citizenship including members of the Bengail,”Rohingya” minority to vote in an upcoming constitutional referendum.
Most Muslim Bengali “Rohingya” are not citizens and prejudice against them is high in the predominantly Buddhist nation.The temporary identification cards popularly called ‘white cards’ were created by the former military regime for the 2010 elections in which it relinquished power toanominally civilian government though under heavy army influence. An army-backed political party won seats in areas with sizable numbers of white card holders.’White card holders are not citizens and those who are non-citizens don’t have the right to vote in other countries. This is justaploy by politicians to win votes’ said Buddhist monk Shin Thumana.
#Eleven#Media #strongly #denounces giving the #right to #vote to the #temporary #citizenship #card (so called White Card) holders
On February 3, 2015 February 5, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Eleven Media Group strongly denounces giving the right to vote to the temporary citizenship card (so called White Card) holders.
1. The Eleven Media Group denounces Union Parliament’s approval for the right to vote by the White Card holders, which the president suggested to approve.
2. Giving the right to vote to the foreigners who are still under scrutiny for citizenship is tantamount to accepting them as citizens which might attract the illegal entering of foreigners from the borderline. In fact, the right to vote is the highest privilege of the citizens.
3. Giving the right to vote to non-citizens or non-ethnics could infringe the rights to create the own destiny of the country’s ethnics who have been living together within the country for thousands of years. Especially, voting by non-ethnics could encroach upon the rights to create the own destiny of the ethnics living in the Rakhine State, Kachin State or Shan State which many foreigners illegally enter via borders.
4. What is more, it might cause other communal conflicts in Rakhine State, Kachin State and Shan State.
5. The Eleven Media Group hereby suggests the Union Parliament to reconsider the issue which can threaten national sovereignty and the emergence ofagenuine Union aspired by ethnic nationals.